BARAYAASHI KILILKA AMXAARADA OO SHAQA JOOJIN KU DHAQAAQAY. – Xeernews24
BARAYAASHI KILILKA AMXAARADA OO SHAQA JOOJIN KU DHAQAAQAY.
Waxaa la sheegay in dugsiyo ku yaal degmooyin ka mid ah soonayaasha Gondar, Goojam iyo Wallo la xidhay kadib markii ay Barayaashi ku dhaqaaqeen shaqa-joojin ay kaga cabanayaan musharka ooo ku yar.
Warkan oo lagu faafiye saaxafada taageerta mucaaradka Itoobiya ayaa lagu xusay in xukuumadu kordhisay masharka shaqaalaha dawlada marka laga reebo ka macalimiinta taas oo dhalisay in qaar ka mid ah barayaasha dugsiyada ismaamulka Axmaaradu shaqada joojiyaan islamarkaana dibadbaxyo sameeyaan.
Itoobiya ayaa mamnuucday shaqo-joojinta, mudahaaradyada iyo in dadka isu yimaadan fasax la’aan. Go’aankan ayaa la dhaqan galiye markii dalka lagu soo rogay xaalad degdeg ah bishii Oktoobar ee kal hore.
Warka mucaaradka ayaa lagu tibaaxay in ciidamada amaanka qaqabteen macalimiin mudahaaraaday oo wadooyinka degmooyinka qaarkood isa soo dhoobay.
Waxaa adag in warkan si madaxbanaan loo xaqiijiyo maadama dawlada Itoobiya ayna inta badan ka hadal xogaha mucaaradku soo bandhigaan islamarkaana saaxafada xorta ah dhaqdhaqaaqeeda la xayiro.
Shaqaalaha Itoobiya ayaa daala-dhacaya sidii ay noloshada u dabari lahaayeen ka dib markii qiimaha cuntada iyo adeegyada kala ay cirka isku shareereen.
Tana waxay dawlada Ethiopia ku noqon doonta dharbaaxo kale oo uga sii dari doonta xaalada siyaasadeed ee dalka oo kolkii horaba Alloow sahal ahaa.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png 0 0 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-08 09:51:222017-03-08 09:51:22BARAYAASHI KILILKA AMXAARADA OO SHAQA JOOJIN KU DHAQAAQAY.
Dib u Milicso Mustaqbalka Villa Somalia W/Q Yuusuf Garaad. Mudane Godoomiye Kan la Xidhay,Kan wax Xidhay,iyo kuwan ciida Salal daldaan...